NAXDIN: Gabar 14 sano ah oo is dishey, Markii ay ku dhacdey Imtixaanka Gudaha Somaliland. - iftineducation.com
iftineducation.com – Gabar 14 sano jir ah, kana mid ahayd Ardadii wax ka baraneysay Dugsiga Hoose/Dhexe ee Imaam Shaafici ayaa is dishay, sida ay sheegayaan Warar laga helayo magaalada Ceerigaabo ee gobolka Sanaag.
Gabadhan oo lagu magacaabi jiray Nimco Axmed Jaamac ayaa Aroortii hore ee saaka la soo weriyay inay Mindi Dhuunta isaga jartay, taasoo ka dambeysay markii ay ogaatay inay ku dhacday imtixaankiii Fasalka 8aad oo ardaydii gashay ay ka mid ahayd.
Nimco eheladeeda ayaa sheegay inay aad uga welwelsaneyd natiijada imtixaankeeda, waxayna ka mid ahayd arday dhan 603 oo ku dhacay imtixaankii laga qaaday dugisyada Gobolada Somaliland.
Isbitaalka ayaa loola cararay Nimca Axmed Jaamac oo dhaawac halis ah isu geysatay, waxayna durbadiiba ku geeriyootayc Isbitaalka Guud ee magaalada Ceerigaabo.
Ardayga dhacday sanadkan degaanada Somaliland ayaa ahaa kuwii ugu badnaa imtixaan qura laga soo calaamadeeyo inay gudbi waayeen.
Warka Gabadha is dishay ayaa naxdin weyn ku noqday magaalada Ceerigaabo iyo degaanada Somaliland, iyadoo ay tahay dhacdadii ugu horeysay ee nooceeda ah.
Fikradaada Facebook Ku Dhiibo Ama Qeybta Hoose Ee Fikradaha